crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Dunida Muslimka | HimiloNetwork
Himilo June 18, 2022	Leave a comment 45 Views
MUQDISHO (HN) — Dad badan oo Muslimiin ladan ah ayaa sannad kasta u baxa gudashada Xajka iyo Cumrada, waxayna ku gaaraan hadba sida ay awoodaan. La-yaabna malahan in baaskiil xattaa lagu yimaado Makka. Muhammad Fauzan oo sannadkan fogaan dhan 5,000 km usoo jaray si uu usoo gaaro Makka isaga oo ku socda baaskiil ayaana kamid ah. Waxayna ku qaadatay in ...
Himilo June 18, 2022	Leave a comment 21 Views
MUQDISHO (HN) — Wedka lama huraayo. Laakiin dhimashada qofka Muslimka ah, sida insaanka kale, waa u tiiraanyo iyo xanuun qoyskiisa. Hayeeshe, marba haddii ay tahay safar aan la hureyn, waa muhiim in la barto sida loogu diyaargaroobo. Meyridda iyo dhaqidda qofka Muslimka ahina waa midda ugu muhiimsan. Sidaas darteed, ayay hey’adda Ilford charity ugu qabatay dhowr haween Muslimaad ah sida ...
Himilo June 18, 2022	Leave a comment 24 Views
MUQDISHO (HN) — Maryam waxay jirtay 7 sanno markii ay u geeriyootay Kansar uga dhacay minka sannadkii 2017. Kahor dhimashadeeda, Maryam ayaa aabaheed Sahgir Ahmed, oo ku nool Birmingham warsatay inuu u baxo Afrika si uu danyarta u caawiyo. “Laba toddobaad kahor dhimashadeeda, waxay ii sheegtay inay dooneyso inay Afrika aado oo ay kasoo dhisto ceelal biyood ay ku harraad-baxaan ...
Sababta Lammaane Muslimiin ah ay hadyado u guddoonsiiyaan ilmaha wadne-xanuunka qaba.
Himilo June 12, 2022	Leave a comment 43 Views
MUQDISHO (HN) — Lammaane Muslimiin ah oo cunug laba jir ah oo ay dhaleen u geeriyooday xanuunka wadne xanuunka ayaa go’aansaday inay raaadkiisa nooleeyaan iyaga oo dadka ku jira isbitaallada ee wadnaha ka xanuunsan. Yahya Rawat, wuxuu ku dhashay xaalado xanuunka wadnaha ah oo isbiirsaday mana loo fileyn inuu sii noolaan doono laba bil kaddib. Wuxuu ku dhintay dhabta hooyadiis ...
Himilo June 12, 2022	Leave a comment 30 Views
MUQDISHO (HN) — Buurfuule Akke Rahman ayaa noqday Muslimkii ugu horreeyey ee ku nool dalka Britain ee kora buurta ugu weyn dunida ee Mount Everest isaga oo dhammeystiraya riyadiisa ahayd inuu yabooh u sameeyo agoonta – isaga oo weliba sooman. Waxay ku qaadatay laba caanamaal ku dhawaad inuu ku gaaro dhakada ama figta sare ee buurta oo dhan 8,849 oo ...
Ardaydii ‘hal maalin ka soomay’ Ramadaanka.
Himilo June 12, 2022	Leave a comment 27 Views
MUQDISHO (HN) — Arday dhigata iskuulka Lancashire ayaa Ramadaankii tagay ka soomay hal maalin si ay ardayda Muslimiinta ah ula qeybsadaan maalintooda waxna uga bartaan waaya’aragnimada soonka. Tallaabtan ay ku dhaqaaqeen ardayda dugsiga Darwen Aldridge Enterprise Studio School waxaa usoo jeediyay barahooda maadada seyniska, Qasim Hussain oo aad ugu faraxsanaa inuu arko ardaydiisa kala diimaha ah inay maalin qura wada soomaan. ...
Himilo May 19, 2022	Leave a comment 48 Views
MUQDISHO (HN) — Laacibka Muslimka ah ee qadka dhexe uga cayaara Kooxda Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye ayaa la seejiyay kulan kamid ah horyaalka dalkaas oo ay la dheelayeen naadiga Montpellier kadib diidmo uu ka keenay xirashada funaanad lagu soo xardhay midabada qaansa-roobaadka ama jeegaanta oo astaan u ah ragga u hawooda ragga kale ee qowmu-luudka ah. Gueye ayaa tarabuunka ka daawanayay ...
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 44 Views
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 38 Views
Himilo May 17, 2022	Leave a comment 42 Views
Ey dayac awgiis u ekaaday sida Madax-kutiga oo laga helay keyn baraf.